Kuuya kwechipiri kwaJesu will ➡️ Discover Online will ➡️ kuchaita sei
Kuuya kwechipiri kwaJesu kunenge kwakaita sei. Chimwe chezvinhu zvikuru zvisingazivikanwe mune zvese zvechiKristu zvinotangira kuuya kwechipiri kwaJesu. Kune vanhu vazhinji, chokwadi ichi chiri padyo chaizvo. Kune vamwe, ichiri kure nzira. Kunyange zvakadaro, hapana ane mhinduro kumubvunzo. Chinhu chete icho muKristu wekutenda anogona kuita kuziva kuuya kwechipiri uye kunyatsogadzirira yechiitiko chakakosha kwazvo munhoroondo.
Neichi chikonzero, kubvira Ziva.online, taida kupindura mibvunzo inonyanya kukosha inobvunzwa nemukristu wese nezve ino nguva. Kune izvi isu tichazvibatsira pachedu nezvikamu zvemubhaibheri zvinorondedzera chokwadi ichi netsananguro yacho inoenderana.
1 Ko kuuya kwechipiri kwaJesu kuchave sei
1.1 Mavhesi eBhaibheri anorondedzera kuuya kwechipiri
2 Kuuya kwechipiri kwaJesu kuchave rini?
Kuuya kwechipiri kwaJesu zvichaitika pakupera kwenguva. Kunze kwezvo, zvese nyika uchazviona. Richava zuva rekutongwa kuvanhu vese. Asi kune avo vakaponeswa, kudzoka kwaJesu kuchave kunounza mufaro, nekuti kuchakunda dhiabhori uye nekuvatungamira kuti vagare naye nekusingaperi.
Pakuuya kwechipiri kwaJesu, nyika yese ichaona Kristu achiburuka kubva kudenga pamwe nengirozi. Tichanzwa hwamanda vakafa vachamuka. Kune rimwe divi, vapenyu vachatorwa. Munhu wese achapfugama kuti anamate Jesu. Nyika yanhasi ichaparadzwa, Humambo hwaMwari huchagadzwa, uye vatendi vachararama nekusingaperi naJesu.
Mavhesi eBhaibheri anorondedzera kuuya kwechipiri
“Ipapo chiratidzo choMwanakomana woMunhu chichaonekwa kudenga, uye ndudzi dzose dzenyika dzichachema uye dzichiona Mwanakomana woMunhu achiuya pamusoro pamakore okudenga nesimba nokubwinya kukuru. Uye achatuma vatumwa vake nekurira kukuru kwehwamanda, uye vachaunganidza vasanangurwa vake kubva kumhepo ina, kubva kumugumo wedenga kusvikira kuno mumwe.
Nekuti kana iko kurongeka kwapihwa, nezwi remutumwa mukuru uye nekurira kwehwamanda yaMwari, Ishe pachake achadzika kubva kudenga, uye vakafa munaKristu vachatanga kumuka. 17 Ipapo isu vapenyu tichatorwa pamwe navo mumakore kuti tinosangana naShe mudenga. Uye saka tichava naShe nekusingaperi. 1
VaTesaronika 4: 16-17
«Uye kune avo vari kunetseka, zorodzai nesu, apo Ishe Jesu paachaonekwa kubva kudenga pamwe nevatumwa vesimba rake,
murimi remoto, kupa kutsiva kune avo vaisaziva Mwari, kana kuteerera evhangeri yaIshe wedu Jesu Kristu;
uyo achatambura kurangwa kusingaperi, kusabviswa pamberi paIshe nekukudzwa kwesimba rake,
paanouya nezuva iro kuzokudzwa muvatsvene vake uye kuzoyemurwa mune vese vakatenda (nekuti uchapupu hwedu hwakatendwa pakati penyu) ». 2
VaTesaronika 1: 7-10
«Kumirira nekuchimbidza kuuya kwezuva raMwari, iro matenga, achitsva, achashanduka, uye zvinhu zvacho, zvichipiswa, zvichanyauka!
13 Asi tinovimba, sezvaakavimbisa, denga idzva nenyika itsva, maanogara Kururamisira. "
2 Petro 3: 12-13
Kuuya kwechipiri kwaJesu kuchave rini?
Hapana anoziva zuva racho umo Jesu achadzoka. Hazvigoneke kufanotaura kuti iro zuva richava rinhi nekuti zvichaitika isu tisina kumirira. Kana mumwe munhu akati ivo vanoziva kuti zvichaitika rini, ivo vari kukanganisa. Kana mumwe munhu akati Jesu atodzoka hatifaniri kuzvitenda nekuti pazvinoitika munhu wese achaziva.
Kana riri zuva neawa, hapana anoziva, kwete ngirozi dzekudenga, kwete Mwanakomana, asi Baba chete.
Mateu 24: 36
Kurongeka kwezviitiko pakuuya kwechipiri kwaJesu hakuna kujeka muBhaibheri. Chinhu chakakosha ndechekuti Jesu achadzoka rimwe zuva uye tinofanira kunge takagadzirira, nekuti zvinogona kuitika chero nguva. Nzira yakanakisa yekugadzirira kuuya kwechipiri kwaJesu kutendeuka pazvivi zvako uye kuraramira Mwari.
Kuuya kwaJesu chikonzero chemufaro uye tariro kumutendi. Hatifanire kutya zvichaitika. Kune avo vakaramba Jesu, richava zuva rekutongwa kwezvivi. Asi kwatiri, zvinoreva kuti tichava naMwari nariini, muHumambo hwekutonga, rugare uye mufaro.
Tinovimba chinyorwa ichi chinokubatsira kuti unzwisise kuti kuuya kwechipiri kwaJesu kunenge kwakaita sei. Kana ikozvino iwe uchida kuziva sei zvakakosha kuenda kuchechi uye zvinotaurwa nebhaibheri panhau iyi, ramba uchivhura Ziva.online.
Hwana hwaJesu hwaive sei?